Fanamarihana ampahany - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Ny fanamarihana ampahany dia fomba iray mahomby amin'ny fampidirana logo na litera manokana ho an'ny volavolanao ary matetika ampiasaina amin'ny fanamarihana marika manokana mandritra ny famokarana feno.
● Ampiharo amin'ireo singa elektronika, boribory mitambatra (IC), fitaovana elektrika, fifandraisana amin'ny finday, vokatra vita amin'ny fitaovana, kojakoja ilaina amin'ny fitaovana, fitaovana marina, solomaso sy famantaranandro, firavaka, faritra misy ny fiara, bokotra plastika, akora fananganana, fantsona PVC, fitaovana fitsaboana ary indostria hafa .
● Ireo fitaovana azo ampiharina dia misy: metaly sy alika mahazatra (vy, varahina, aliminioma, manezioma, zinc ary metaly hafa), metaly sy firaka tsy fahita firy (volamena, volafotsy, titanium), oksida metaly (azo ekena ny karazana oksida metaly rehetra), Surface manokana fitsaboana (phosphating, aluminium anodization, electroplating ambonin'ny), fitaovana ABS (trano elektrika ilaina, ilaina isan'andro), ranomainty (fanalahidy mangarahara, vokatra vita pirinty), résin epoxy (fonosana singa elektronika, sosona insulation).
Ny fanamarihana ny vokatra dia misy ny fanamarihana laser sy ny sokitra cnc.
● Ny fanamarihana laser dia fomba fanamarihana izay mampiasa laser amin'ny alàlan'ny angovo avo lenta mba handradradradra eo an-toerana ilay fitaovana hampiasana etona ny akony ambonimbony na hamokatra fiovan'ny zavatra simika amin'ny fiovan'ny loko, ka hamela marika maharitra.
● Ny fitsipika fototry ny fanamarihana tamin'ny laser dia ny taratra laser maharitra angovo avo lenta izay ateraky ny mpamorona laser, ary ny laser mifantoka dia mihetsika amin'ny fitaovana fanontam-pirinty mba hitsonika avy hatrany na hanafoana ny fitaovana ambonimbony aza. Amin'ny alàlan'ny fifehezana ny làlan'ny laser amin'ny sehatry ny fitaovana, mamolavola marika marika ilaina.
● Ny fanamarihana laser dia miavaka amin'ny fanodinana tsy fifandraisana, izay azo asiana marika amin'ny endrika endrika manokana, ary ny fitaovam-piasana dia tsy ho simba ary hiteraka adin-tsaina anatiny. Mety amin'ny fanamarihana metaly, plastika, vera, seramika, hazo, hoditra ary fitaovana hafa.
● Ny laser dia afaka manamarika saika ny faritra rehetra (toy ny piston, peratra piston, valves, seza valizy, fitaovana enti-miasa, fanadiovana, kojakoja elektronika, sns.), Ary mahazaka fanoherana ny marika, mora ny mandeha ho azy ny fizotry ny famokarana, ary ireo faritra voamarika ireo dia tsy misy fiovana kely.
● Izy io dia mety amin'ny fanapahana, sary sokitra roa refy ary sary sokitra telo refy amin'ny fitaovana fisaka isan-karazany. Ankoatr'izay, ny tena asa sy tombony azo amin'ny milina fanoratana takelaka vy maro karazana: mahery, tanjona marobe, na ny fanaovana varahina, vy tsy misy fangarony, titanium, aliminiana ary taratasy hafa vita amin'ny vy, endrika sokitra ary asa tanana kanto kanto. , sns Vitao izany. Noho ny asan'ny sokitra sy ny plating matanjaka an'ity milina ity, ny workpiece dia azo zahana hatramin'ny famantarana lehibe endrika ka hatramin'ny saron-tratra sy ny takelaka kely.
● Ny sokitra CNC dia fitambaran'ny fandavahana sy fikosoham-bary raha ny amin'ny lozisialy fanodinana. Ny fisafidianana marina ireo zavatra sokitra CNC sy ny fampiasana ny haitao mety dia mety ho lasa tetikasa manana fiverenana ambony amin'ny fampiasam-bola. Satria ny zavatra sokitra CNC dia miavaka amin'ny lamina sarotra, endrika miavaka ary vokatra vita tsara, ary ny milina fanaovana sokitra CNC dia rafitra mavesatra maivana, io dia mametra ny fomba fiasan'ny sokitra CNC toy ny: "fikosoham-bary haingana miaraka amin'ny fitaovana kely". Raha ny marina dia ity ihany koa no "tombony matihanina" an'ny sokitra CNC, ary ny antony dia ny fanaovana sokitra CNC dia manao "orinasa tsy azo zahana fitaovana lehibe mahazatra". Noho ny tombony manokana miavaka amin'ny sokitra CNC, ny sokitra GNC dia mora kokoa amin'ireto orinasa manaraka ireto: indostrian'ny sokitra bobongolo sy indostrian'ny sokitra dokambarotra.